अब विद्युतीय स्कुटर दर्ता अनिवार्य !
सरकारले दर्ताविनै सडकमा गुडिरहेका विद्युतीय स्कुटी र मोटरसाइकलमाथि कारबाही गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले विदेशबाट आउने सवारीसाधन अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको हो।
विभागले ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालय नक्साललाई पत्र लेख्दै त्यस्ता सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्न भनेको छ। विभागले पत्रमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १४ को उपदफा १ अनुसार विदेशबाट ल्याइएका सवारीसाधन १५ दिनभित्रै नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने तथा सोही ऐनको उपदफा २ अनुसार दर्ता नगरी चलाउन नपाउने भए पनि राजधानीका सडकमा दर्ताविनै त्यस्ता सवारीसाधन चलिरहेकोले कारबाही गर्न प्रहरीसँग अनुरोध गरेको हो।
* ७ छोरीको बाबूले डाक्टरलाई भने यो छोरा नबाचे म पनि बाच्दिन !
जुम्लाको तिला गुफा नगरपालिकाका ६२ वर्षीय भक्तबहादुर बोगटी जुम्लास्थित कर्णाली प्रतिष्ठान अस्पतालमा पाँच वर्षीय छोरा विशाल बोगटीको उपचारमा छन्। घरनजिकैको स्कूल जाँदै गर्दा बाटोमा जङ्गली फल मचैनो खाँदा बिरामी भएका छोराको स्वास्थ्य अवस्था निकै चिन्ताजनक भएपछि उनी अस्पताल पुगेका हुन्।
अस्पताल पुग्नेवित्तिकै बोगटीले डाक्टरलाई भने, “यो मेरो एक्लो छोरा हो। जसरी पनि बचाइदिनुुस् डाक्टर’साब । यो छोरो रहेन भने म पनि रहनेछैन।”बोगटीले छोराकै आशमा सात छोरी जन्माए। छोराको आसमा सात छोरी जन्माएको कथा सुनाउँदा उपचारमा संलग्न चिकित्सक दङ्ग परे।
चिकित्सकले उपचार शुरु गरे। उपचारपछि उनका छोराको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रँदै गइरहेको छ। “अहिले खेल्न र बोल्नसक्ने भएको छ”, बोगटीले भने, “कर्णाली अस्पताल हुँदैनथ्यो त छोरो हुँदैनथ्यो, छोरो नहुँदा म पनि यो संसारमा हुन्नथेँ होला, छोरो बाँचेकामा धेरै खुशी छु।” बोगटीका छोराको सघन उपचारकक्षमा उपचार भइरहेको छ। उहाँका अनुसार छ छोरी जन्मिसकेपछि सातौँ पटक छोरा जन्मिएको हो।
“छोराभन्दा पछाडि फेरि एउटी छोरी जन्मिएकी छे”, बोगटीले भने “यो समाज छोरा जन्मेकामा उत्सव मनाउँछ, छोरी जन्मेकामा घृणा गर्छ। समाजकै लागि भए पनि छोरा खोजेको हुँ । छोराकै आसमा सात छोरी भए । बीचमा भाग्यवश जन्मेको यो छोरा बचाउन खुब प्रयन्त गर्दैछु।”
उनका छ छोरीको विवाह भइसकेको छ। कान्छी छोरी, एक छोरा र श्रीमती मात्र साथमा छन्। “समयमै छोरा जन्मिएको भए लालनपालनमा राहत मिल्थ्यो होला,’ बोगटीले भने, ‘छोरी भए, अर्काको घर गए, एक्लो बनाए। अहिले सहाराविहीनझैँ छु।”
कर्णाली प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले छोराको आसमा सात छोरी जन्माएका उहाँले एक्लो छोरा बचाउन गरेको हारगुहारले अस्पतालको ध्यान केन्द्रित भएको बताए।
उनले भने, “जङ्गली फल खाँदा त्यसको असर दिमागमा परेको देखियो। छोरो छटपटाउन थाल्यो। बाबु उपचारका लागि रोइकराइ गर्न थाले। तर बिहानै निको भएर छोरा बोल्न थालेपछि मुहारमा खुशी देखियो।”
सात छोरीको बीचमा जन्मिएको छोरो बिरामी हुँदा घरपरिवारमा निकै रुवावासी चलेको बोगटी बताउँछन्। “निको भएर घर फर्कुंला भन्ने आस थिएन”, उनी भन्छन्, “अब छोरा निको भएपछि खुशीसाथ घर फर्कंदै छु । छोराको उपचार हुन नसकेको भए म घर फर्कने थिइनँ । अब खुशीका साथ फर्कन्छु, छोराले पुनःजन्म पायो!”
* गुणकारी दही खान नजान्दा यस्ता समस्याहरु देखा पर्न सक्छन् !
दूधबाट बनेको परिकारलाई दही भनिन्छ । दही जाडोमा भन्दा गर्मीमा धेरै खाइन्छ । दही खानु धेरै व्यक्ति मन पराउँछन् भने कम मात्रामा दही खान मन नपराउनेहरू पनि पाइन्छ । गर्मीमा यसको सेवनले शरीरमा शीतलता प्रदान गर्ने भएकै कारणले पनि मानिसहरू यसलाई गर्मीमा धेरै खान मन पराउँछन् । दहीको माग गर्मी मौसममा निकै बढ्छ भने जाडोमा घट्छ ।
हाम्रो स्वास्थ्यलाई दही सेवन गरेमा निकै फाइदा जनक साबित हुन्छ । बढी जसो मानिसहरूलाई दही सँग केही मिसाएर खाने आदत हुन्छ l तर, सबै खानेकुरा दही सँग मिसाएर खानु हाम्रो स्वास्थ्य लागी उचित हुँदैन l जस्तै केही चिजहरू दहीसँग एकसाथ खाँदा शरीरमा टक्सिन बन्न थाल्छ । फलस्वरूप उल्टी हुने, पेटमा गडबड हुनेजस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
* दहीसँग खानै नहुने यी चिजहरु ।
– केरा र दही :
केरा र दही मिसाएर खानाले स्वास्थ्यमा खराबी हुन्छ । यदि खानै परे पनि २ घण्टाको फरक पारेर मात्र खानुपर्छ ।
– चीज र दही :
आयुर्वेदले चीज र दहीलाई पनि एकैसाथ खान वर्जित गरेको छ । यिनलाई एकै पटक खाँदा शरीरमा नकारात्मक असर गर्छ ।
– मासको दालसँग दही :
मासको दाल र दही एकसाथ खानु भनेको विष सेवन गरे सरह हो । भुलेर पनि यिनलाई एकसाथ खानुहुँदैन ।
– आँप र दही :
गर्मी फलको राजा मानिने आँप हो । भुलेर पनि आँप र दही एकसाथ खानु हुँदैन किनभने यी दुइटाको स्वभाव विपरीत हुन्छ । दही शीतकारक हुन्छ भने आँपले गर्मी गराउँछ तसर्थ एकसाथ सेवन गर्दा शरीरमा टक्सिन निर्माण हुनसक्छ । यी दुई खानेकुरा एकै साथ सेवन गर्नाले शरीरमा टक्सिन निर्माण हुनसक्छ । किनकि दुई विपरीत हुन्, एउटा शीतकारक हुन्छ भने आँपले गर्मी हुन्छ l सो कारण यी दुई खानेकुरा सँगै सेवन नगरौँ ।
गुणकारी दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा फाइदा हुन्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा ध्यान दिएन भने यो विष पनि बन्न सक्छ । दही सौन्दर्यका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । यसले पाचन क्रियालाई चुस्त राख्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न ठूलो सहयोग गर्छ । दहीको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नभएमा विषाक्त बन्न पुग्नेछ।
यस्ता बेलामा दही खादाः
राति दही खाँदा पाचन क्रियामा गडबडी गर्छ ।
राति खाएर सुतेमा समस्या हुन सक्छ ।
राति दही सेवन गर्दा रुघा र खोकी लाग्न सक्छ ।
शरीरको कुनै भाग सुन्निएको छ भने राति दही खाएमा सुन्निएको झन् बढ्छ ।
घुँडा वा जोर्नीको दुखाईबाट पिडित भएको अवस्थामा दही सेवन गर्नाले दुखाईलाई झनै बढाउछ ।
फलफूल दहीमा मिसाएर खाँदा पनि विषाक्त बन्न सक्छ ।
– मेडिकल रिपोर्टहरुको सहयोगमा